Tababare Frank Lampard oo xaqiijiyay haddii uu Tammy Abraham diyaar u yahay kulanka habeen dambe ee Aston Villa – Gool FM
(London) 03 Dis 2019. Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa soo saaray warbixin cusub ee ku saabsan suurtogalnimada uu Tammy Abraham, kulanka ay la ciyaarayaan habeen dambe kooxda Aston Villa.
41 jirkan reer England ayaa ka dhawaajiyey in weeraryahanka daa’da yar ee Tammy Abraham uu seegi doono kulanka ay la ciyaarayaan habeen dambe kooxda Aston Villa horyaalka Premier League, haddii uu ku guuldareysto inuu ka gudbo baaritaanka caafimaad.
Tammy Abraham ayaa seegay kulankii ay Chelsea guuldarrada 0-1 kala kulantay kooxda West Ham Sabtidii lasoo dhaafay, kaddib markii uu ku guuldareystay inuu ka soo kabto dhaawacii ka soo gaadhay kulankii Valencia ee Champions League.
Frank Lampard ayaa kahor ciyaarta habeen dambe ka dhici doonta garoonka Stamford Bridge, wuxuu ka soo muuqday shir Jaraa’id wuxuuna yiri:
“Waxaan siin doonaa fursad uu ku ciyaaro kulanka Aston Villa, waan u yeeri doonaa, waxa uu dareemay xoogaa xanuun ah, balse haatan xaalad wanaagsan ayuu ku jiraa, wuxuuna jecelyahay inuu ciyaaro”.
“Tammy Abraham waa ciyaaryahan muhim inoo ah, waxaa jirtay cabsi ku aadan inuu maqnaan doono wax ka badan isbuuc kaddib dhaawaca soo gaaray, laakiin si fiican ayuu uga soo kabsaday waxaana la rajeynayaa inuu soo laabto dhawaan, laakiin ma rabno inaan qatar galino isaga”.